LIISKA UGU CAANSAN EE GEEDAHA CAANKA AH (SHARAXAAD IYO SAWIR) - MASJIDKA GEEDKA
Masjidka geedka (laga bilaabo Laatinka Paeonia x suffruticosa), waa jeexan nus, waa nooc ka mid ah warshad isku dhafan ee caanaha Peony waxayna u taagan tahay qoysaska maskaxda. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahannada qaarkood ma kala soocaan geedo geedo ah noocyada kala duwan, laakiin waxay ku kala qaybiyaan koox noocyo ah iyo noocyo asal ah oo asal ah.
Maanta aduunka ayaa jira in ka badan shan boqol oo noocyo iyo Beelaha geedka this, intooda badani waxay ku koraan dalka Shiinaha. Waxaa habboon in la xuso taas peonies geed iyo iyaga noocyo waa wax soo saarka shaqada ee Shiinaha Shiinaha. Peonies Tree waxaa lagu soo bandhigay Yurub dhamaadkii qarnigii 18aad, ka dibna waxay u qalmaan aqoonsi buuxa oo ka yimid beeralayda ubaxa xirfadlayda iyo beerta hiwaayadda.
Ma taqaanaa? Inta lagu jiro xilliga ubax, kaas oo soconaya 2 asbuuc, in ka badan 50 ubax ayaa ku duuli kara hal baadiyaha ah ee masaxa geedka!
Warshadu waa geed cireed ah wuxuu gaaraa dherer ah 1.5 - 2 mitir. Goobuhu waa qaro weyn yihiin, oo ay ku kala duwan yihiin midab khafiif ah. Cawska masjidka geedka ma dhimanayaan dayr kasta, sida lafaha ah ee masjidka cawska ah, si ka soo horjeeda, waxay koraan sannad kasta oo si tartiib ah u gooyaa geedka qafil. Caleenta maskaxaha dhirta waa laba jeer oo fiiqan, shaqo furan, ornamental.
Peony waxay leedahay ubax aad u ballaadhan, sidaas awgeed waxay u egtahay 12 - 20 sentimitir dhexroor iyo xitaa in ka badan. Ubaxku wuxuu ku yaalaa xagga dambe ee caleemaha waxayna leeyihiin midabyo kala duwan - midab, jaalle, casaan, casaan, guduud ama xitaa laba midab. Tilmaamaha masjidka geedku waa kan geedka weyn ee geedka, ubaxyo dheeraad ah u Blooms. Geedka ubaxa geedaha wuxuu bilawdaa nus bil ka hor inta aan cawsku socon oo soconaya 2 - 3 asbuuc. Sidoo kale, peonies geedka waa mid aad u qabow u adkaysta.
Waa muhiim! Masjidka geedka waa geedka oo ah mid aad u-udul-uuna u adkaysto, geedaha korriinka ee sii kordhaya ee cimilada kulul ma aha mid adag. Laakiin xilliga jiilaalka heerkulku hoos u dhaco, ka dibna waxa fiican in la doorto noocyo gaar ah oo qabow u adkaysta ("Hoffman", "Peter The Great", "Jaamacadda Moscow", iwm)
Auguste Dessert peony wuxuu leeyahay jilicsan, laba jibbaaran iyo laba jibbaaran, taas oo u eg sida miro leh kareem hawo leh. Tufaaxa madow waxay si gaar ah u qurux badan yihiin - waxay ku qoslaan midab madow ah waxayna leeyihiin xuduud ah qaab "lacag ah" thread. " Isku-dhafkan wuxuu siinayaa ubaxyo muuqaal gaar ah oo asal ah. Noocyo of Augustus peeni Augustus u muuqdaan weyn ee ubax ah iyo muddo dheer lagu keydiyaa cut.
Waxay leedahay baadiyaha yar oo gaareysa 1.5 m.. Peonies kala duwan "Anastasia Sosnowiec" gebi ahaanba ka fogaan murtida. Saldhigga ugu weyn ee xayawaanku waa meel fuchsia ah. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa 10-11 sentimitir, tufaaxuna waa caddaan, oo leh geeso yar oo jilicsan oo loo qaabeeyey 2 saf oo qaab blossoms peoni cad.
Baddal ballaaran oo buluug ah
Ubaxyada noocan oo kale ah ayaa lagu gartaa midab madow, oo casaan ah. Dhexdhexaadiyaha ubaxa waa 17 sentimitir, qaabka waa casaan. Burburka geedaha noocan oo kale ah waa mid adag, qiyaastii 120-150 sentimitir oo dherer ah. Waa arrin aad u wiiqday xaaladaha ciidda, laakiin waxay si fiican ugu koraan bacriminta, si fiican u engegay, ciidda alkaliin. Tilmaamaha waxaa lagama maarmaan u ah inay muujiyaan iska caabbinta xaaladaha deegaanka, iyo sidoo kale cudurada iyo cayayaanka kala duwan.
Waa muhiim! Carrabka Alkaline ayaa ah midka ugu wanaagsan ee loo yaqaan "peonies". Ha iloobin inaad ku darto burka dolomite marka la beero - waa lagama maarmaan u ah liming ee ciidda agagaarka geedka
Noocyada "Hoffman" kala duwan waxay leeyihiin baadiyaha ballaaran oo cufan iyo cawsu badan, iyagoo gaaraya 120 sentimitir dherer ahaan. Peduncles waa mid aad u adag. Ubaxa wuxuu leeyahay hooska casaanka ah ee jilicsan, oo saldhig u ah tufaaxa waxaa jira waxyaalo yar yar oo midabo ah. Ubax waa semi-double, xiran yahay, mid ka mid ah peduncle, dhexroorka waa 17-18 sentimitir. Muddada ubaxu waxay dhacdaa dhammaadka May - bilowga Juun iyo waa 10-14 maalmood. "Hoffman" waxay u adkaysatay cudurrada iyo heerkulkoodu hooseeyo, qurux badan oo lagu qurxiyo sariiraha ubaxa.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee noocyada kala duwan waa ubaxyo cagaaran aan caadi ahayn.. Ubaxyo waa wareegsan, Terry iyo halkii weyn. Bartamaha meydka, tufaaxu aad ayay u adagtahay midba midka kale, sameynta xaadirka "geed geed". Buundada dhirtu waxay gaartaa hal mitir iyo mitir nus ah. Ubaxku wuxuu billaabmaa Abriil wuxuuna soconayaa ilaa bilowga Juun. The afkoda dhirta this waa xoog leh, qaro weyn oo aad u jilicsan. Hardy ku filan, laakiin wuxuu jecel yahay iftiinka qorraxda oo si fiican u koraa meelaha dadka da 'yarta ah.
"Delaveya" waxaa loola jeedaa noocyo kala duwan oo lagu qurxiyo. In dabeecadda, height of duurka ma ka badan hal mitir. Waqtiga ubaxu waa Juun. Caleemaha caleemaha ayaa laba jeer lafdhab u ah, qiyaastii 15-25 sentimitir dherer, cagaar mugdi ah, cagaarka hoose ee hoose, ku fadhiiso ku filan dheer (ilaa 15 cm) petioles. Caleen kasta wuxuu u qaybsan yahay qaybo fara badan.
Ubax keli ah, oo ku yaala dhinaca dambe ee caleemaha. Ubax kasta wuxuu ka kooban yahay 5-9 dabeecad eel ah, isagoo leh midab madow ama midab madow. Peonies cultivar "Delaveya" si fiican u koraan ee nafaqo leh, qoyan iyo si fiican loo miiray ciidda. Wuxuu jecel yahay meelo qorrax leh. Waxay leedahay iska caabin cad si aad u qabow, laakiin xilliga qaboobaha nidaamka xididka waa in lagu daboolaa caleemo qallalan iyo labbisyo laamood.
Ma taqaanaa? Masjidka geedku wuxuu awoodaa inuu kobciyo hal meel 100-150 sano!
Meesha allabariga dhirta
Sida muuqaalka geedkaani wuxuu si buuxda u caddeeyaa magaca noocyada kala duwan. Duufaannada lafdhabarashada leh ee muuqaalkoodu waxay u eg yihiin kuwo qurux badan. Ubaxadu waxay leeyihiin qaab la isku dhajiyay oo isku dhafan oo leh midab cad oo casaan leh. Inflorescences gaaraan dhexroor 20 sentimitir. Bushku wuxuu koraa 1.5 m. Wakhtiga ubaxu waa Juun. "Qoryaha Coral" waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican, iyo sidoo kale geedo kooxeed.
Noocyada kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa ah dhirbaaxada, waxay ku qaadataa 110 sentimitir oo dherer ah. Peduncles xoog leh oo adag. Ubax waa caddaan, gaaraan dhexroorka 18-23 sentimitir, dhexdhexaad ah, oo leh qaab isku mid ah. On peduncle waa ubax kaliya. Waqtiga ubaxu wuxuu yimaadaa dhammaadka Maajo wuxuuna soconayaa ilaa bilowga Juun. "Mary" waa mid u adkaysata cudurrada kala duwan iyo heerkulka hooseeya. Wanaagsan beerta iyo jarista.
Waa muhiim! Beerta ugu horeysa ubaxa ubaxa waa in la gooyaa marxaladda furan, iyada oo aan sugin ubax culus. Haddii dhirta ay ka muuqato 2 sprouts iyo 2 burooyinkeeda, markaas waa inaad sugto waqtiga dhoobada. Ka dibna si tartiib ah u xoqin ubaxa sare ee irbadda oo ka sii daa dabada ilaa ay gebi ahaan qalalaan. Ayadoo la qalajiyey, gaduudku wuxuu soo celin doonaa dhammaan qaybaha raadadka ee loo yaqaan "pion".
"Sapphire" - Boqorka dhabta ah ee beerta, caleemaha qurxinta, oo leh wejiyo waaweyn oo dhalaalaya oo jilicsan ayaa ku qabsan doona wadnahaaga. Ubax ee tufaaxan waa mid casaan leh oo leh xarun hoy adag. Dhexdhexaadiyaha inflorescence wuxuu gaari karaa 18 sentimitir. Xilliga ubaxa "Sapphire" wuxuu bilaabmaa Juun. Tirada ubaxa waxay gaari kartaa 50 gogo '(!) Heerka baadiyaha waxay gaartaa 1.2 mitir. Si fiican u qurxin beerta, kaas oo ku beeray ugu yaraan dhirta, laakiin sidoo kale la iska indha tiri doono beeritaanka kooxda.
Noocyada peony geed waxay u taagan yihiin, laga yaabee, Mid ka mid ah noocyada ugu xiisaha badan waa Kiao Sisters. Muuqaalkiisa ugu weyni waa inflorescences, midabka casaan jilicsan. Sida caadiga ah, "gabdhaha" nus nus ee ubaxa waxay leeyihiin guduud-cas, iyo hooska kale ee kareem-cad. Dhexdhexaadiyaha inflorescences wuxuu gaaraa 16 sentimitir. Badanaa baadiyaha noocaan ah waxay koraa 1.3 mitir. Waqtiga ubaxu wuxuu dhacaa bisha Juun. Peonies noocan oo kale ah waxay ku habboon yihiin qaababka muuqaalka dhulka oo leh farqada cadcad iyo casaan.
"Pagoda Snow" ayaa hubaal ka dhigeysa taabashada cusub iyo raaxada goobtaada. Waxaa iska leh noocyo leh inflorescences cad, laakiin marmarka qaarkood ubax waxay yeelan kartaa midab jilicsan oo jilicsan. Dhexdhexaadiyaha ubaxa wuxuu gaari doonaa 16 sentimitir. Booska isku midka ah wuxuu koraa 1.5 mitir oo dherer ah. Ubaxku wuxuu dhacaa qeybta dambe ee Juun. Waxay si fiican ugu habboon tahay muuqaalka, waxay ku sarreysaa midabo dhalaalaya oo cad.
Ma taqaanaa? Geeduhu waxay awoodaan inay midho u dhasho. Midhaha miraha waxaa lagu magacaabaa buugyaraha, waxayna u bislaadaan bisha July-August.
Burburkii noocan oo kale ah ee masjidku waa uu kicinayaa, wuxuu gaaraa mitir dherer. Caleemaha "Istefanos" waa kuwo waaweyn, xididdada ayaa leh midab yar oo anthocyanin ah. Ubaxadu waxay leeyihiin midab ciriiri ah, oo saldhig u ah tufaaxa waxaa jira meel yar oo macaan ah. Ubaxa waa mid aan la cuni karin, qiyaastii 18-20 sentimitir dhexdhexaad ah. Ubaxku wuxuu bilaabmaa dhammaadka May waxana uu socdaa 8-10 maalmood. Daawo qabow iyo cudurro kala duwan. Wanaagsan ee qurxinta ubaxyada sariiraha ubaxa.
Peony Tree waa quruxda dhabta ah ee beertaada, si fiican u daryeeli isaga, waana uu ku farxi doonaa barbarkiisa dhalaalaya!
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Masjidka geedka 2020